13/12/2019 - 15:45 : ALGERIE:Lany ho filoham-pierena Atoa Abdelmadjid Tebboune tamin'ny isam-bato 58,15%.
13/12/2019 - 15:30 : FIFANINANA FIDIRANA HO POLISY:Nahitana filaharambe teny amin'ny fananterana atontan-taratasy fidirana amin'ny fifaninana amin'izao fotoana izao,rahampitso no fantatra fa fara fanaterana ny atontan-taratasy.
13/12/2019 - 15:25 : ADY AMIN'NY HERISETRA:Lany tsy nasiam-panitsiana teo anivon'ny antenimieram-pirenena androany ny volavolan-dalana hiadiana amin'ny herisetra miankina amin'ny saranga.Solombavambahoaka 70 no nandany izany.
13/12/2019 - 15:15 : KIDNAPPING:Nisy naka an-keriny teny Soavimbahoaka, ny marainan’ity zoma 13 desambra ity, i Navaze Veldjee. Nanamafy izany ny CFOIM (Collectif Français d'Origine Indienne de Madagascar).
13/12/2019 - 15:00 : KOLONTSAINYA:Teraka lahy kely i Black Nadia ary fantatra fa i Bradley no anarany.Izahay eto amin'ny Tia Tanindrazana dia mirary soa ho azy.
Archive du 20191120
Firenena Tatsinanana Mila mazava tsara ny fiaraha-miasa
Manamafy ny fiaraha-miasa amin’i Sina sy Rosia i Madagasikara. Sina dia efa ela no nisandrahaka maneran-tany, indrindra taty Afrika.
Hafahafa ny resaka “Iles Eparses” Niala an-daharana ny Pr Raymond Ranjeva
Tsy hita tao anatin’ny sary iombonana (photo de famille) taorian’ilay dinika nifanaovana teny Andafiavaratra momba ny raharaha Nosy Malagasy nobodoin’ny Frantsay ny Profesora Ranjeva Raymond,
Constant Raveloson “Alaivo aloha ny hevitr’ireo filoha teo aloha…”
Firaisankina izao no ilaina, hoy ny filohan'ny Repoblilka. Tsapany izany fa tsy fananany irery akory i Madagasikara, hoy Atoa Constant Raveloson.
Radanoara Julien “Mila mitokona manoloana ny masoivoho Frantsay…”
Vita ny fihaonana voalohany teo amin’ny vaomiera roa tonta misahana ny famerenana ireo nosy « Eparses ».
Antenimieram-pirenena Omena sehatra ireo mpandraharaha madinika
Ny 93% amin’ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara dia tsy manara-dalàna ary saika 98% amin’ny tanora no mirona ao anatiny,
Edito Soa fa teo ny Omby !
Mafy ny Omby ! Mafy ilay Barea ! Santionany amin’ireo horakoraky ny vahoaka Malagasy izany satria dia tsy mbola nisy toa an’iny omaly iny teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Malagasy.
Kaompania Air Mauritius « ilaina ny fitsinjovana ny mpanjifa »
Ho fitsinjovana ny mpanjifa dia mihena hatrany amin’ny 20% ny saran’ny sidina mankany amina toerana maromaro.
Rano fisotro azo antoka Mitady hanahirana
Ny rano atolotry ny Jirama efa iaraha-mahita fa na toy ny lokon-dranom-boamadilo na mandroatra be.
Fanajana ny zon’ny ankizy 2 tapitrisa mahery ireo tsy manan-tsiny tokony havotana
Mbola goragora tanteraka ny fampiharana sy fanajana ny zon’ny ankizy eto amintsika.
Antsirabe 10 tapitrisa ariary ny kilaon’ny taolam-paty
Araka ny fanadihadian'ny polisim-pirenena ao amin'ny kaomisarian' Antsirabe, 10 000 000 Ariary no noheverin'ireo mpamaky fasana tao Ambatomenaloha Tsaravavaka,
Hopitalim-panjakana tsy misy fanafody 10 000Ar ny “consultation” any Namahora
Velon-taraina ny olona any Morondava noho ny tsy fisiana fanafidy ao amin’ny Hopitaly Namahora.
Halatra moto Atolotra fampanoavana anio ilay mpisera
Famonoana mpiandry ondry sy osy tany Mahajanga Naiditra am-ponja vonjimaika ilay nahavanon-doza
Any am-ponjan'ny Mahajanga no miandry fitsarana ilay namono nahafaty ny tovolahy 15 taona izay mpiandry ondry sy osy amam-polony maro.